Filipino writer | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Filipino writer
एनिमेले, हामी सबैलाई थाहा छ, जापानीहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब तपाईं शब्द “एनिमे” भन्नुहुन्छ, पहिलो शब्द दिमागमा आउँछ “जापान र जापानी।” तर सबै भन्दा पहिले, मूल कुराको साथ सुरू गरौं – एनिमे भनेको के हो र यो कसरी नियमित कार्टुनबाट भिन्न छ? के हो त एनिमे? jp.fotolia.com/ एनिमे एनिमेसनको छोटो रुप हो। यो जापानीमा…
सानशिन किन्नु भनेको आर्टिस्ट हुनु हो भन्ने जापानमा उखान छ। सानशिन जापानी पारम्परिक बाज हो जुनलाई एसेम्बल गर्न धेरै समय लाग्दछ। यो बाजा बजाउने तरिका निकै पुरानो र गाह्रो छ। तर यो बाजाको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हजुरलाई थाहा छैन होला। ओकिनावामा यो बाजालाई आरामदायी र टेन्सन कम गर्ने माध्यमको रुपमा लिईन्छ। यो ईतिहासको बाजा…
विषालु सर्पबाट बनेको ओकिनावा वाइन
यदि हजुर पक्कै पनि अनौठो कुरा खान, वा नया चिज अनुभब गर्न मन पराउनु हुन्न भने, यो लेख हजुरको लागि होइन। तर हजुर अनौठो कुराको पारखी हुनु हुन्छ भने पक्कै पनि यो लेख पढ्नु होला। हुन पनि को मानिसले चाही जानी जानी बिसालु सर्प पालेर, सर्प बीच प्रजनन गराई त्यसपछि त्यो सर्प लाई मरेर त्यसको…
जापान्ग्रेजी (जापानी र अंग्रेजी)का १० शब्द जुन थहा पाई राख्दा राम्रो
हामी जति आफ्नो भाषा बोल्दा आनिमे, पोकेमोन, सुशी, जस्ता ठेट जापानी शब्द प्रयोग गर्दछौ, जापानीहरु पनि अंग्रेजी भाषाका शब्दहरु सापट लिएर अनेकौ तरिकाले प्रयोग गर्दछन। हामी नेपालीहरु पनि त अंग्रेजी भाषालाई अनेक तबरले बिगारेर प्रयोग गर्दछौ नि हैन र ? अंग्रेजी भाषा बिस्वब्यापी भएको हुनाले पनि यो भाषाको शब्दहरु अरु भाषामा प्रयोग हुनु अनौठो कुरा…
गर्मीमा क्योतोको यो रेटुराण्ट्मा बग्ने नुडलको मजा लिनुस।
मेकअप पारखीको लागि जापानको पाच ब्युटी प्रोडक्ट